FOMBA HANANA VONDRAN'NY VONDRO VONDRAN-DALANA FALY SY Mora | Asa tanana
Irene Gil | | asa-tanana, Asa tanana taratasy, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Ho an'ny lohataona a Satro-boninkazo amin'ny rindrina sy ny varavarana. Miaraka amin'ity tutorial azonao atao ny iray taratasy ny habe sy ny loko tadiavinao, fa haingana sy mora. Tsara koa ny manao amin'ny ankizy.
To do the Satro-boninkazo mila kely ianao fitaovana:
Ho hitanao fa a asa-tanana tena tsotra nefa tena haingon-trano y SAMBATRA ho an'ny lohataona sy fahavaratra. ny loko mampatsiahy kely ny satroboninahitra y hary garland na dia tsy voninkazo amin'ity fomba ity aza izy ireo. Na izany aza, azonao atao ny manamboatra azy amin'ny loko tianao indrindra. Topazo maso ity manaraka ity Video-tutorial aiza no hanazavako ny dingana hahafahanao mamorona azy NY TENANAO.
Efa hitanao ve ny fomba tsotra? Mbola hotsaroantsika ny dingana hanaraka mba tsy hanadinoanao ny iray amin'izy ireo ary azonao atao ny Satro-boninkazo tsisy olana.
Angony taratasy 5.
Hetezo anaty faribolana izy ireo.
Ampifanaraho amin'ny staples miendrika lakroa roa ireo.
Manaova fanapahana eo afovoany hatrany an-tsisiny.
Saraho ny sosona tsirairay amin'ny fametahana azy eo afovoan'ny voninkazo.
Mamorona faribolana amin'ny tariby.
Afatory ny voninkazo manodidina ny tariby iray manontolo amin'ny alàlan'ny tsiranoka silicone.
Ary toy izany no fomba mora ho vitao ny satroboninahitrao.
Ity karazana satro-boninahitra ity dia toa tsara amin'ny roa varavarana toy ny rindrina. manome fikitihana haingon-trano tena falifaly amin'ny toerana rehetra.
Raha hanao izany ianao ankizy, ampiasao ny hety ho an'ny ankizy ary ampio izy ireo ho foto-tsakafo, satria mety somary manahirana ity dingana ity. Raha tsy te hampiasa ianao silipo mafana azonao atao koa ny manao azy silipo mangatsiaka y Lakaoly fotsy, fa satria tsy eo noho eo ireo adhesives ireo dia tokony avelanao ho tsara tohana eo amboniny ny satroboninahitra voninkazo ka tsy hianjera ny voninkazo raha mbola vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » FOMBA HANANA VONDROM-boninkazo voninkazo haingana sy mora